शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौलाको अवैध कारोबार, स्याउ भन्दै मृर्गौला निकालियो ! « Deshko News
शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौलाको अवैध कारोबार, स्याउ भन्दै मृर्गौला निकालियो !
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाटै मिर्गौलाको अवैध कारोबार भएको पाइएको छ। मृर्गौला तस्कर गिरोहले आर्थिक प्रलोभनमा पारेका विपन्न व्यक्तिको मिर्गौला शिक्षण अस्पतालमा झिकिएको हो।
यसमा अस्पतालका दुई कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको आशंकामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन गरिरहेको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
पोखरामा घर निर्माणको काम गर्ने खत्रीलाई स्थानीय नारायण जिसीले एउटा स्याउ (मिर्गौला) दिए १० लाख नगद, ऋणमा गाडी र जागिर उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर काठमाडौं ल्याएका थिए। जिसीले उनलाई भक्तपुरका प्रकाश बस्नेतको जिम्मा लगाए। उनले मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका शम्भुलालसँग चिनजान गराए। मृगौला झिकिनुअघिको चार महिना खत्री उनकै घरमा बसे।
तर, सहमतिअनुसार तस्कर समूहले रकम नदिँदा एक वर्षपछि खत्रीले घटना बाहिर ल्याएका हुन्। सुरुमा आफुलाई मिगौला निकालिने जानकारी नै नभएको, अन्तिम समयमा थाहा पाउँदा मृगौला निकाल्न नदिए ज्यान मार्ने धम्की समेत तस्करहरुको समुहले दिएको उनको दाबी छ।
अप्रेसन गरेपछि तस्कर श्रेष्ठले नवीनलाई एक लाख २५ हजार रुपैयाँ दिएका थिए। सहमतिअनुसार पैसा नदिए मिडियामा जाने चेतावनी दिएपछि खत्रीले पुनः पाँच लाख पाएका थिए। खाजा खाने क्रममा पोखराका नारायण जिसीसँग चिनजान भयो। नजिकिँदै जाँदा उनले एउटा स्याउ (मिर्गौला) दिए १० लाख नगद, गाडी र जागिर उपलब्ध गराउने भन्दै काठमाडौं लिएर आए,’ खत्रीले भने।
मिर्गौला निकालिएको विषयमा शम्भुलाल श्रेष्ठ र प्रकाश बस्नेतलाई फोन गर्दा उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। शिक्षण अस्पतालले खत्रीलाई २३ र शम्भुलाललाई २५ पुस ०७३ मा डिस्चार्ज गरेको थियो।
‘मिर्गौला निकाल्न नदिए मार्छु भन्ने धम्की आयो’